Alatsinainy mainty 26 janoary 2009 : Tsy ho voafafa mandrakizay ny rà latsaka -
AccueilRaharaham-pirenenaAlatsinainy mainty 26 janoary 2009 : Tsy ho voafafa mandrakizay ny rà latsaka
Alatsinainy mainty 26 janoary 2009 : Tsy ho voafafa mandrakizay ny rà latsaka
26/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Matimaty foana ny olona, nanao sorona ny ainy sy namoy ny ainy noho ny fanohanana an-dRajoelina sy Ravalomanana, lavo tamin’ireny alatsinainy mainty, ny 26 janoary 2009 iny. Ireo rava fananana sy maty havana hatramin’izao dia mbola tsy nikatona ny fery. Miisa 500 eo ho eo ny aina nafoy tamin’izany, raha ny tarehimarika nivoaka. Noho ny fitiavam-pahefana teo amin-dRajoelina no anton’izany famoizana ain’olona izany. Sivy taona aty aoriana, dia mahay mihavana noho ny fitiavam-pahefana ireo filoha teo aloha ireo noho ny fitiavam-pahefana mavaivay.
Mbola tsy tafarina ireo orinasa potika tamin’izany fanonganam-panjakana izany, ary nisy tamin’ireo tokantrano sasany aza no nisara-bazana tanteraka satria nifampiandany, tamin’ny Tim sy ny Tgv ny mpianakavy. Fahapotehina sy faharavana, ary fandorana tanàna no nentin’ny fifanandrinan-dRavalomanana sy Rajoelina tamin’izany.
Mitsingerina anio moa izany alatsinainy mainty izany, saingy vao mainka indray àry faharavana goavana noho ny tamin’izany no tadiavin’ireto filoha teo aloha hapetraka eto amin’izao fotoana.
Efa nanao pi-maso tany amin-dRajoelina i Marc Ravalomanana, ary efa nanambara iry voalohany fa tsy misy olana aminy izany.
Ny fanontaniana dia ny hoe “ any amin’ireo efa nanimba ny toekarena indray ve no hametrahana ny fitantanana ny firenena ? Ny valiny : Tsia. Tsy any amin’ny mpamosavy no hitady fanafody raha marary, fa any amin’ny dokotera manana fanafody mahavelona”. Hatramin’izao anie ka mbola eo am-panarenana ny fahapotehana napetrak’ireto filoha teo aloha ireto ny fitondram-panjakana. Tsy ho jamba akory ny Malagasy, ka ny mpitondra efa namono ny havany, efa nanala ny asa teo am-pelatanany no andeha haveriny eo amin’ny fitondrana indray. Na hanao hetsika faran’izay raitra any Paris any aza ry Rajoelina Andry tsy hahafafa an’izany fahotana mahafaty nataony teto tamin’ny 26 janoary 2009 izany, izy sy ry Ravalomanana Marc.
Ny vahoaka no mahita ny mpitondra mendrika, mbola tsy nandatsa-drà sy manana vina mazava hampandrosoana an’i Madagasikara, tahaka ny efa nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, nandritra ny lanonana fampahafantarana an’i “Madagasikara Fisandratana” teny Iavoloha.
Porno dans Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet
Senatera Lylyson : VOAHELOKA HERINTAONA AN-TRANOMAIZINA
Omaly maraina no nivoaka ny didim-pitsarana izay niampangana ny Senatera Lylyson Roland momba ny raharaha fiantsoana tanàna maty tamin’ny taona lasa. Voasazy herintaona sazy mihatra i senatera araka ny didy navoakan’ny fitsarana. Isan’ny nihampangana azy ...Tohiny
Tetezan’Iombifotsy – Arivonimamo : Olona efatra matin’ny lozam-piarakodia
Marc Ravalomanana : Hanome lanja ny eny ifotony
Fiarahamiasa amin’ny Sinoa : Mangarahara tanteraka
Marc Ravalomanana : Tafita ny hafatra
Porno: Very nice article and right to the point. I don't know if this is in fact the best place to…